Dhinacyada Yemen oo Heshiis Hordhac ah Gaadhay
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa sheegay in xisbiyada kala duwan oo ay ku jiraan Xuutiyiinta Mucaaradka ah ee dhowaan awoodda la wareegay ay u dhowdahay inay gaadhaan heshiis dalkaas ka badbaadiya inuu galo dagaallo sokeeye.
“Waxaanu qaadnay tallaabo muhiim ah, taas oo aanu hore ugu soconay, inaanu gaadhno heshiis siyaasadeed oo aanu ku soo afjarayno xiisadda taagan” ayuu yidhi Jamal BenOmar oo shalay qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook.
“Dhinacyada ka qaybgelaya wadahadalkani waxay ku heshiiyeen gole baarlamaan oo ku meel gaadh ah; kaas oo dammaanad qaadaya inay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada aan xilligan ku jirin golaha hoose ee baarlamaanka” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Heshiiskan cusub ayaa dhigaya in golaha hoose ee baarlamaanku uu ahaanayo sidan uu iminka u dhisan yahay, hase ahaatee la samaynayo golaha Congresska oo loo bixinayo Golaha Shacabka ee ku meelgaadhka ah.
Mohamed Albasha waa Afhayeenka Safaaradda Yemen ee dalkan Maraykanka, wuxuu u sheegay VOA in heshiiska la gaadhay ee ku aaddan in la bedelo Golaha SAre ee dalkaan isla markaana lagu bedelo Gole ku meel gaadh ah inay tahay tallaabo dhinaca habboon loo qaaday.